Carleton University - Fianarana any Kanada. Fampianarana an-tany hafa Magazine
Créé : 1942
mpianatra (eo ho eo.) : 29000
Aza adino ny miresaka momba Carleton University
Misoratra anarana ao amin'ny Carleton University
Toerana amin'ny toeram-pianarana tsara tarehy nanamorona ny mamirapiratra Rideau River sy Canal, Carleton fotsiny minitra avy ao am-po ny ny firenentsika ny governemanta sy mora manana fahafahana miditra amin'ny fikambanana maro, ny fikambanana sy ny raharaham-barotra, izay miroborobo any Ottawa. Maro ny mpitarika Ontario orinasa teknolojia avo manodidina ny toeram-pianarana izay manapaka-lelan fikarohana lasa mpikamban'ny amin'ny tena mitondra zava-baovao fampianarana mba hamahana olana tena-fiainana. Mpikambana ao mavitrika, fikarohana be tokoa oniversite, Carleton ny sampam-pianarana sy ny mpiasa manome traikefa fianarana ambony kokoa noho ny tsara mpianatra izay havandra amin'ny isan-tokony sy ny 100 firenena manerana izao tontolo izao.
Carleton tolotra 65 fandaharana ny fianarana eo amin'ny faritra toy ny samihafa toy ny raharaha-bahoaka, fanaovan-gazety, horonan-tsary fanadihadiana, injeniera, teknolojia avo sy ny iraisam-pirenena fampianarana. Mihoatra ny 2,000 mamirapiratra mpampianatra sy ny mpiasa anisan'ny ekipa hafa sy vita fanoloran-tena manompo 28,000 mpianatra. Carleton ny famoronana, interdisciplinary sy ny iraisam-pirenena ny fikarohana fomba nahatonga ny maro hitan'ny mpahay siansa lehibe sy ny famoronana asa amin'ny siansa sy ny teknolojia, raharaham-barotra, Fitantanam-pitondrana, panjakana politika sy ny zava-kanto.
Mpianatra Tena VIPs ny Carleton tobim-pianarana sy ny trano fonenana sy ny fialam-boly mankafy fandaharana ary koa isan-karazany ny hetsika ara-kolontsaina sy ara-tsosialy. Ny fanafiana masina lahateny mitondra izao tontolo izao mpiteny ny laza amin 'ny fonenan'ny mpianatra sy akaiky ho any an-tanàna dia ahafahana hankafy zava-mitranga eran-mpianatra tao amin'ny National Arts Centre sy ny tranom-bakoka sy ny lalan-tsarany maro manerana ny tanàna.
Faculty ny Zavakanto sy ny Siansa Sosialy
Faculty ny Zavakanto sy ny Siansa Sosialy Homepage
Center for Initiatives in Fampianarana (ahitana ny nampananana harena Support Program)
College ny Humanities (dia ahitana ny Bachelor ny Humanities, Grika sy romanina Fianarana (taloha Classics), fivavahana)
Departemantan'ny Teny sy ny Literatiora Anglisy
Department of frantsay
Departemantan'ny Fampianarana Jeografia sy ny tontolo iainana
Departemantan'ny bola sy ny Anthropology
Institute for mampitaha Fianarana Haisoratra, Art ary Kolontsaina
Institute ny fandroson'ny ara-pahalalana Science
Institute of Interdisciplinary Fianarana (Child dia ahitana Studies, Nitarika Interdisciplinary Studies, Zon'olombelona)
Pauline Jewett Institute ny vehivavy sy ny Miralenta Studies
Sekoly ho an'ny Fianarana Art sy Kolontsaina (dia ahitana Art History, Film Studies, Music)
Sekoly Fianarana ny Canadian
Sekolin'ny Linguistics sy Fianarana Fiteny
Department of Engineering sivily sy ny tontolo iainana
Department of Engineering Mechanical sy Aerospace
Departemantan'ny Systems sy solosaina Engineering
Azrieli Sekoly Maritrano sy ny Tanàn-dehibe
Faculty ny Graduate sy Postdoctoral Raharaha
Public Affairs Faculty ny Homepage
Arthur Kroeger College Filazam-Affairs
Department of Toekarena
Departemantan'ny Fampianarana Lalàna sy Legal
Departemantan'ny siansa politika
Institute ny heloka bevava sy heloka bevava Justice
Institute of Eoropeanina, Rosiana sy Eurasian Fianarana
Institute ny Politika Toe-karena
Norman Paterson Sekolin'ny Raharaha Iraisam-pirenena
Sekoly fanaovan-gazety sy ny fifandraisana
Sekoly-bahoaka Politika sy ny Administration
Sekoly asa ara-tsosialy
Institute sady mpikaroka
Institute ny Tontolo Iainana Science
teknolojia, Fikambanana, tontolo iainana Studies
Ny Sprott School of Business
Carleton University ny fakany ho toy ny tsy anaram-piangonana tohanan'ny oniversite ny ampahany amin'ny fanomezana fiantrana avy amin'ny vondrom-piarahamonina Ottawa ataovy eo Ontario anjerimanontolo tokana. naorina in 1942, Carleton noforonina ho setrin'ny fa ilaina ny manampy manome ny tanora ao Ottawa, maro izay efa naka ny asa mba hiatrehana ny olana ny Fahasahiranana Ara-toekarena, miaraka amin'ny fahafahana hanohy ny fianarana.
Avy ny manetry tena Ottawa ny fiandohan'ny amin'ny Avenue Voalohany, Carleton dia nitombo lasa mavitrika fikarohana sy fampianarana rafitra amin'ny fampianarana voatolotry ny razana niandry sady mitondra fiovana. ankehitriny, ny anjerimanontolo mipetraka eo mihoatra noho ny 100 hektara, amin'ny toerana eo amin'ny Rideau River sy ny Rideau Canal, fotsiny tsy lavitra avy any afovoan-tanàna Ottawa.
Ny oniversite dia manome fanabeazana tsara sy traikefa ho any amin'ny mihoatra noho ny 24,000 feno- ary tapa-potoana tao amin'ny undergraduate mpianatra sy ny diplaoma haavon'ny. Ny mihoatra noho ny 875 akademika mpiasa no fantatra sehatra iraisam-pirenena noho ny vatsim-pianarana sady niteti-sisin'ny fikarohana be noho 50 fitsipika.
Carleton ny lazany dia miorina eo amin'ny hery any an-tsaha ny fanaovan-gazety, raharaha-bahoaka, raharaha iraisam-pirenena, trano sy ny teknolojia avo. Ny mpianatra handray soa avy amin'ny interdisciplinary, active, -tanana amin'ny fomba fampianarana sy ny fikarohana ataon'ny mpikambana ao amin'ny sampam-pianarana sy ny maro dia manana fiaraha-miasa ny anjerimanontolo amin'ny governemanta federaly, hafa anjerimanontolo sy ny sehatra tsy miankina mpiara-miombon'antoka.
Ianao ve mila miresaka momba Carleton University ? Any fanontaniana, fanehoan-kevitra na hevitra
Carleton University ao amin'ny Map
Photos: Carleton University ofisialy Facebook
Carleton University Hevitra
Miaraha mba hifanakalo hevitra momba ny Carleton University.